vcp-510 exam CompTIA 220-802
खचाखच भरिएको बसभित्र उनीहरुको आँखा जुध्यो । सुमन साँघुरो कापमा जीउ सानो पारेर बिरालो छिरेजस्तै खाँदाखाँद मान्छेहरुको चेपबाट छिर्दै पछिल्तिर सर्दैथिइन् । राजु दुईवटै घुँडा मान्छे हिंड्ने प्यासेजपट्टी पारेर पछिल्तिरको एउटा सिटमा चाकमात्र टेकाएर बसेको थियो । दुवैजना एकाएक झस्किएझैं भए । अर्को-अर्कोतिर नजर फर्काएर नदेखेझैं गर्न चाहे । यसअघिका एकाध जम्काभेटहरुलाई उनीहरुले यसैगरि नदेखेझैं टारेका थिए तर चट्पटाउँनै मुश्किल हुने भीडमा आज त्यो सम्भव थिएन । जुधेको आँखाले त देख्यो उनीहरु एकअर्कालाई तर मनले सायद देख्न सकेन अत: मुस्कुराउँन सकेनन् । दुवैको मुहार उज्यालो हुनुको सट्टा भर्खरै माछा मारेको पानीको दहलो जस्तै धमिलो भएर आयो ।
'याँ बस्ने?' परिस्थिती सजिलो पार्ने कोशिस गर्‍यो राजुले तर बस्ने भनेर सोध्ने हिसाबको बस्ने ठाउँ भने थिएन । दुईजनाको सिटमा ऊ बाहेक अरु दुईजना मोटाघाटा घाँटी र भुँडीतिर मासुको लुँदा झुण्डिएका अधबैंसे उमेरका आइमाईहरु थिए । तिनीहरू रोकेर राखेको भए बसनै तर्सेर गुड्ला जत्तिकै ठूलो स्वरले हाँस्दै बाक्लै नुन खुर्सानीको धूलो छर्किएको काँक्रा खाइरहेथे ।
'होइन । मलाई यैं ठीक छ ।' बोली फुटाउँन करै लाग्यो सुमनलाई । केहिबेर फेरि बसभित्रको भीडमा उनीहरूलाई मौनताले ऐंठन पारेजत्तिकै बनायो ।
CompTIA sy0-301 dumps
'के छ खबर?' कोलाहलमय भीडमा ठडिएको मौनता राजुले नै चिर्‍यो । सोधिरहँदा राजुलाई आपसी सम्बन्धको रहस्य फुस्किएला भन्ने चिन्ता छँदैथियो ।
Cisco CCNA 200-120 exam Cisco 642-902 dumps
'ठीकै छु । तपाईं नि?, अनि कस्ती छन् त राशी मिलेकि दुलही?' केहिपनि सोध्न र सुनाउन मन नभए जस्तै गरेर सोध्दा सुमनको आँखामा त्यसदिनको प्रेमी राजु नाचिरहेको थियो, जो आँखाभरी आँशु लिएर भन्दैथियो, 'राशी नै मिलेन भनेर घरमा कसैले मानेनन् । के गर्ने होला?'
अक्मकियो राजु । सुमनले यो कुरा सोध्लिन् भनेर नसोचेको हुनसक्छ उसले ।
ISC CISSP exam dumps Swarovski Pendants Swarovski Rings
'ए! बुइनीलाई पनि था'छ राशीको कुरा? त्यो राशी त काँ चिनाको राशी नमिलेको हो त? धनको राशी पो नमिलेको त । यताबाट कुस्त दाइजो आउने भएपछि कस्ले त्यो केई नहुनेकि छोरी बिहे गर्छ?' सँगैबसेकि खाइलाग्दी आइमाईले सुमन र राजुको कुरामा मिसिएर भनिन् र पुन: झ्यालपट्टीकी साथीसँग यतापट्टीको कुरा सुनेकै छैन जस्तै गरेर गफिन थालिन् ।